Islaamku waxa uu ina bari karo faragelinta goobjooge - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
November 28, 2021 Warar & Muuqaal 0
Ilaalada ka socota Waddooyinka Main ayaa u baxa waddooyinka si ay u ilaaliyaan bulshada Flushing, New York. (Sawirka: Instagram/Patrol Street Main)
(Lagu soo diray Rabshad La'aan, May 21, 2021)
By: Aadan Armaan
Inta lagu guda jiro bisha Muslimka ah ee sooman ee Ramadaan (oo ay muslimiintu u fahmeen inay tahay bisha ugu wanaagsan ee laga fiirsado, lana sameeyo isbeddel wanaagsan), dareenkaygu wuxuu soo jiitay kor u kaca dembiyada nacaybka ee Aasiya. Sida lagu xusay New York Times Horraantii Abriil, waxaa dalka Mareykanka laga soo sheegay in ka badan 110 kiis oo ah dambiyada nacaybka nacaybka ah ee Asia ilaa bishii Maarso 2020, kuwaas oo u dhexeeyay weerarro jireed iyo kuwo af ah iyo falal kharribaad ah. Anigoo ah Muslim iyo Aasiya labadaba, waxaan la socdaa isbeddelladan caalamiga ah anigoo isku mar isku dayaya inaan soo ceshano ereyada la lunsaday ee dhaqanka caqiidadeyda si aan uga hortago Islaam nacaybka baahsan ee adduunka oo dhan.
Nacaybka Aasiya iyo Islaam nacaybka ayaa ka soo ifbaxaya siyaasadda dadka kale iyo dadnimada ka fogaanaya, taas oo ay ku dhisan yihiin sarreynta cadaanka iyo nidaamyada kale ee dulmiga. Anigoo maskaxda ku hayna, waxaa jira duruus laga soo qaatay dhaqankeyga diineed si aan si wanagsan ugu fahmo doorka qofka ee ka hortagga nacaybka iyo dhisidda nabadda.
Waxa dadka kale ay ugu dambeyntii sameeyaan waxaa laga yaabaa inay ka baxaan xakamayntayada, haddana sida aan u dooranno inaan ka jawaabno ayaa si fiican ugu jirta awoodeena.
"Jihaad" waa eray si xad dhaaf ah loo isticmaalo Warbaahinta reer galbeedka, taas oo la lunsaday, laga saaray nuxurka baaqeeda. Marka laga soo tago nooc ka mid ah dagaalka quduuska ah, jihaadka waxaa loo fahmi karaa ficilka (dib u celinta) colaadaha iyada oo aan rabshad lahayn. Erayga Jihaad waxa uu si toos ah u tarjumaa “halgan” ama “halgan” oo ah dhaqan maalinle ah oo la isla xisaabtan iyo hagaajin, iyo sidoo kale in aan lagu mashquulin nolol xumo. Waa in wanaagga la faro, xumaantana laga reebo. Anshaxa waxa wanaagsan ama xun ayaa dood u ah - in kasta oo inteena badan aan ku heshiin karno in aysan jirin wax wanaagsan ama uun ka soo baxa cunsuriyadda. Raacitaanka in wanaagga la farayo oo laga reebo xumaanta waa sida jihaadku ula xidhiidho “faragelinta goob joogga”.
Faragelinta goob-joogtu waa u yeedhid-ficil qof walba si uu u noqdo masuul oo ka fiirsada, iyo in la dhexgalo oo la dejiyo xaalad marka caddaalad-darro - ama noocyo kala duwan oo dhibaatayn iyo/ama rabshado - dhacayo. Waxaa jira dhowr digniinood. Had iyo jeer way wanaagsan tahay in la weydiiyo haddii qofka la dhibaataynayo uu u baahan yahay kaalmadaada iyo, haddii aad ka welwelsan tahay badbaadadaada markaad dhexgelinayso, isku day inaad taageero ka codsato dadka kale ee kuu dhow.
Hollaback!, madal caalami ah oo lagu soo afjaro dhibaataynta noocyadeeda kala duwan, waxay samaysay shan hab oo caan ah oo faragelin ah oo ay ugu yeeraan 5Ds. Waa inay mashquuliyaan, wakiishaan, qoraan, daahiyaan oo toosiyaan. In la mashquuliyo waa in laga jeediyo dareenka dembiilaha bartilmaameedkooda. Taas waxaa loo samayn karaa siyaabo kala duwan, sida in la iska dhigo qof lumay oo la waydiiyo jihada cidda la beegsanayo, in la iska dhigo in la yaqaan cidda la beegsanayo, in si bakhtiyaan ah loo heeso, ama in la dhex istaago dembiilaha iyo cidda la beegsanayo iyada oo la adeegsanayo fal xeeladaysan " xannibidda,” si ay u jebiyaan xiriirka aragga ee u dhexeeya.
In la wakiisho waa in aad caawimo ka raadsato dadka xilalka haya (sida macaliminta, ilaalada, shaqaalaha taraafikada ama kormeerayaasha dukaanka) iyo kuwa kale ee ag taagan si ay u waydiiyaan haddii ay rabaan in ay gacan siiyaan si wadajir ah u dhexgalaan.
In la diiwaangeliyo waa in la duubo muuqaal dhacdada dhacaya, kaliya marka ay jiraan kuwa kale oo isku dayaya in ay soo farageliyaan (haddii kale, isticmaal mid ka mid ah 4D-yada kale). Hubi inaad fogaato badbaado leh, oo sheeg wakhtiga, taariikhda iyo goobta duubista. Marka xaaladdu ay xumaato, weydii bartilmaameedka waxa ay jeclaan lahaayeen in lagu sameeyo clip-ka.
In dib loo dhigo waa in lala soo galo qofka la beegsaday marka ay dhacdo, oo aad uga damqato waxa dhacay, oo aad weydiiso waxa la samayn karo si loo taageero. Waa muhiim in la ogeysiiyo inaysan keligood ahayn.
In la tilmaamo waa in laga hadlo dembiilaha, badanaa marka la qiimeeyo heerka badbaadada ee xaaladda. Ha ogaadaan waxa ay samaynayaan in ay xaq-darro/ khaldan yihiin oo ay ka daayaan cidda la beegsanayo, iyaga oo u samaynaya soohdin adag si kooban oo kooban. Dabadeed, u rog diiradda bartilmaameedka si aad u aragto sida ay wax u socdaan oo weydii sida ugu wanaagsan ee aad u muujin karto daryeelkaaga iyo taageeradaada.
Asal ahaan, ka-hortagga is-dhex-galka waa ficilka in la is geliyo dhacdo dhibaatayn ah iyadoo la taageerayo laguna nasinayo qofka (dadka) la beegsaday, iyadoo laga ilaalinayo dhibaateeyaha/ dambiilaha.
Aad u fiican tusaale ahaan Faragelinta guusha leh waa kiiska Raymond Hing, oo ah 21 jir u dhashay Singapore kaas oo lagu weeraray UK bishii Abriil. Youtuber Ingiriis ah oo kaliya loo yaqaan Sherwin, waxa dhacday in ay ku soo wareegayeen aagga iyada oo si toos ah loo daawanayo. Waxa uu u fiirsaday dhacdadan soo shaac baxday oo uu soo dhexgalay isaga oo aan ka labalabayn. Sherwin waxay u yaaciday dhanka Hing waxayna ku cel-celisay, "Kala tag!" ka dibna wuxuu sii waday inuu joojiyo gardarrada inuu qabsado Hing. Falka Sherwin ayaa sababay in gacan ku dhiiglaha uu goobta ka baxsado, waxaana wax yar kadib booliska lala xiriiriyay. Nafta Hing ayaa suurtagal ah in la badbaadsho, maadaama uu gardarradu markii horeba mindi kala soo baxay. The wax lagu qoro Dhacdadan ayaa ku faaftay Youtube-ka waxayna ku dhiirigelisay qaar badan inay ka feejignaadaan, haddii ay isku arkaan xaalad la mid ah.
Barashada wax ku saabsan faragelinta dadka is-hortaagay waxay igu dhiirigelisay oo si qoto dheer iiga gilgishay, si gaar ahna waxay i xasuusisay xadiis, ama barid nebiyad ah oo Islaamka: “Qofkii xumaan arka, gacantiisa ha ku beddelo; hadduusan awoodinna, carrabkiisa ku daa; hadduusan awoodin, qalbigiisa ha la jirto, oo kaasu waa kan iimaanka ugu liita. "Gacanta" xadiiskan waxa ay tilmaamaysaa in la qaado tallaabo lagu beddelayo jidh ahaan ama lagu baabi'inayo caddaalad-darrada (xigmadda nebiyadu ee ku wajahan xaaladaha rabshad la'aanta); "Carrabka" macnaheedu waxa weeye adeegsiga codkaaga si aad ugu dhawaaqdo caddaalad-darro; iyo "qalbi" waxa ay tilmaamaysaa ujeedadaada, waxayna ku lug yeelan doontaa dhacdada (xitaa haddii aad tahay kaliya qof aan dhexgal ahayn oo markhaati ka ah) si loo xasuusiyo inaadan sii faafin caddaalad-darradan, wax ka barato, oo aad ku dadaalayso inaad noqoto mid wanaagsan.
Heer sare, ama "ehsan" waa in la sameeyo dhammaan saddexda si wadajir ah. Marka laga soo horjeedo dulmiga, ujeedo, ama "niyyah," waa shay kale oo muhiim ah, iyada oo udub dhexaad u ah kuwa la dulmiyay / la dulmiyay, halkii ay ka raadin lahaayeen sharaf ama geesinimo. Taasna waxaa lagu xasuusinayaa xadiis kale: “Ajirka camalku wuxuu ku xiran yahay niyadda, qof walbana wuxuu helayaa ajarkiisa siduu ugu tala galay”.
Waxa dadka kale ay ugu dambeyntii sameeyaan waxaa laga yaabaa inay ka baxaan xakamayntayada, haddana sida aan u dooranno inaan ka jawaabno ayaa si fiican ugu jirta awoodeena. Ma jiro khilaaf ama kala go'aan u dhexeeya dhaqamada iimaanka iyo nolol maalmeedka. Ficilka jihaadka, ama dadaalku, wuxuu jiraa maalin kasta: shaqada aadista, horumarinta waxbarashada, abuurista qoys caafimaad qaba, iyo xitaa faragelinta ciddiyaha. Dhammaan hawlahaas, waxaan ku dadaali karnaa inaan hagaajino tayada nolosha nafteena iyo kuwa kale ee nagu xeeran. Sida casharradani soo jeedinayaan, liddi ku ah sawirada khaldan ee warbaahinta reer galbeedka, dhaqankayga diineed wuxuu leeyahay xikmad badan oo lagu bixiyo sida looga hortago nacaybka iyo dhisida nabadda.
Xusuusta Olga Vorkunova, Exec. Xoghayaha Guddiga Waxbarashada Nabadda ee IPR
Glenn D. Paige: hormuudka daraasadaha aan dilin iyo cilmibaaraha nabada (1929-2017)
January 24, 2017 Warar & Muuqaal 0
Axad Janaayo 22, 2017, Glenn D. Paige wuxuu ku geeryooday Honolulu kadib markuu la daalaa dhacayay xanuuno isagoo jira 87. Aasaasihii Xarunta Caalamiga ee nonkilling, noloshiisu waa nolol inbadan ku bixisay rumaysadkiisa adag ee ah inay dunidu kari karto u beddel sida ugu wanaagsan; dilkaasina wuxuu ku dhamaan karaa soo ifbaxa iyo horumarka aqoonta aan la dilin. [sii wad akhriska…]
Sidee adduunku u caddaynayaa Martin Luther King inuu xaq u leeyahay rabshadaha
January 19, 2016 Warar & Muuqaal 0
Tan iyo 2011, adduunku wuxuu ahaa meel si qoto dheer loogu muransan yahay. In kasta oo kacdoonnada hubeysan ay ka caroodeen Bariga Dhexe, Sahel iyo Koonfurta Aasiya, haddana iskahorimaadyada sokeeye ee rabshadaha ka socdaa ma ahan waddadii ugu horreysay ee dadku raadsadaan inay ku xalliyaan cabashooyinkooda. Taabadalkeed, min Tunis ilaa Taxriir Square, laga bilaabo Zuccotti Park ilaa Ferguson, laga bilaabo Burkina Faso ilaa Hong Kong, dhaqdhaqaaqyada adduunka oo dhami waxay ku qotomeen casharrada Gandhi, King iyo hawlwadeenada maalin kasta ee gudaha iyo dibaddaba si loogu riixo isbeddel. (Sannadkii 2011) markii aan qodnay xogta, waxaan ogaanay in ololayaasha iska caabbinta aan xasilooneyn aysan ku guuleysan iyagoo dhalaalaya quluubta kuwa ka soo horjeeda. Taa baddalkeeda, waxay u muuqdaan inay guuleystaan ​​maxaa yeelay hababka aan rabshadaha lahayn waxay leeyihiin awood weyn oo lagu soo bandhigi karo kaqeybgal ballaaran - celcelis ahaan, waxay soo bandhigaan qiyaastii 11 jeer kaqeybgalayaal ka badan celceliska kacdoonka hubaysan - iyo sababta oo ah tani waa isha laga helo isbeddelada awoodda ugu weyn ee nidaamka mucaaradka. Taasi waxay ahayd 2011. Hadda waa 2016. Maxaan ka baranay iska caabbinta aan rabshadaha lahayn shantii sano ee la soo dhaafay? Maqaalkani wuxuu sawirayaa qaar ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee laga qaato sayniska siyaasadeed, qaar ka mid ah kuwaas oo leh saameyn la yaab leh oo ku saabsan shakiga ficillada aan rabshadaha lahayn. [sii wad akhriska…]
Isuduwaha Manhajka Dugsiga Sare ee ICNC 2018/2019
March 9, 2018 Fursadaha maalgelinta 0
ICNC waxay soo saareysaa baaqii seddexaad ee deeqda waxbarasho ee iska caabinta madaniga ah ee loogu talagalay barayaasha dugsiga sare ee hal abuurka leh ee adduunka oo idil. Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: Maarso 25, 2018. [sii wad akhriska…]